Stockunlimited waxay bixisaa soo degsasho aan xadidnayn oo jaantusyo ah oo lacag ah bishiiba | Abuurista khadka tooska ah
Netflix, Spotifty, HBO iyo adeegyo kale, waxay bixiyaan a content weyn oo aan xad lahayn lacag bille ah. Adeegyadan noocan ahi waxay ku jaango'an yihiin sidii loo heli lahaa heesaha ugu wanaagsan ee khadka tooska ah looga daawado, taxanaha telefishanka ugu fiican ama filimadaas mala awaalka ah sida kuwa Amazon Prime Video ay bixinayeen ilaa shalay.
Noocan oo kale ah qaab ayaa laga heli karaa a degel loo yaqaan StockUnlimited iyo in lagu bixiyo qadar yar oo lacag ah bishii helitaanka soo degsasho aan xadidnayn oo muuqaallo ah, sawirro, astaamo, badhanno, sooyaal, qaabab kayd ah iyo waxyaabo kaloo badan. Adeeg aan ogaanay oo ka mid ah wanaagiisa waa cusbooneysiinta waxyaabahaas si aad u soo dejiso si aad had iyo jeer ula socoto waxa ka dhacaya adduunka naqshadeynta.
Ilaa maanta taas kuma dhegi kartid cusboonaysiinta webka boggayaga oo aan la taaban sanado. Ku dhowaad sannad kasta waa inaad taabataa halkan iyo halkaas si macmiilka ama isticmaalaha, markii uu galayo degelkeenna, uu leeyahay dareen ah inay wax socdaan oo aanu sii joogayn.
Marka, si loo awoodo in loo cusbooneysiiyo astaamahaas garaafka ah, ma jirto hab ka fiican oo lagu sameeyo marka loo eego adeeg sida kan la bixiyo Xaddid la'aan. Websaydh marka laga reebo u heellan xirfadlayaasha, sidoo kale waa meesha ugu fiican kuwa aan naqshadeeyayaasha ahayn, laakiin isagu wuxuu leeyahay baloog uu isagu jecel yahay inuu ku daro mar mar taabasho leh astaan ​​cusub ama taariikh cusub.
Akhristeyaasheena waxaan u haynaa dalab gaar ah. Waad kireysan kartaa qorshe marin 3-sano ah oo loogu talagalay $ 119 wadar. Dalabku wuu xadidan yahay laga bilaabo maanta ilaa bil kadib hada oo si aad u hesho waa inaad isticmaashaa promocode SUCRON01. Qiimaha adeegga caadiga ah muddo 3 sano ah noqon lahaa $ 684, sidaa darteed halkaas waxaad fursad ugu leedahay keyd weyn.
Qorshaha StockUnlimited waxaa ka mid ah 600.000 vectors premium, sawirro, soo dejin aan xadidneyn, 24/7 taageero macaamiil iyo dammaanad-celin lacageed. Madaxa ka noqo boggooda si aad wax uga ogaato wax kasta oo ay bixiyaan, taas oo ah wax badan.
Fursad weyn maalmahaan oo aad ubaahan karto kaarka kirismaska ​​ama salaanta sanadka cusub ee soo galaya. Adduunyada dhijitaalka ah ee aan ku aragno nafteena, haysashada noocyo badan oo ilaha sawirada ah, sida StockUnlinited ay heshay, ayaa muhiimad weyn u leh inay ahaato mid asal ah, marka laga reebo xaqiiqda ah in vector, awood u leh inay wax ka beddelaan waa ku dhowaad aan dhammaad lahayn iyada oo aan lumin iota tayo leh habka abuurista.
Xitaa haddii sheygaagu yahay fiidiyowyada ama maqalka (waxaa ka mid ah saamaynta dhawaaqa), ayaa la cusbooneysiiyay waqti aan fogayn Nooca noocan ah si aad u isticmaali karto loogu talagalay kanaallada YouTube ama soo bandhigidda dhammaan noocyada adeegyada ama alaabooyinka.
Shaki la'aan, StockUnlimited waa adeeg aad u xiiso badan loogu talagalay dhammaan kuwa raadinaya ilaha noocyadooda kala duwan ee hawl maalmeedkooda iyo kuwa isticmaalaya qaabkaas rukunka ee sida wanaagsan ugu shaqeynaya Spotify, Netflyx iyo kuwa kale oo badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » StockUnlimited waxay ku siineysaa inaad soo dejiso aan xadidneyn oo muuqaallo ah, sawirro iyo wax la mid ah Netflix